Kolikoly, firaisana tsikombakomba, fihoaram-pefy… : hanasa ny lamba malotony ny zandarimariam-pirenena | NewsMada
Kolikoly, firaisana tsikombakomba, fihoaram-pefy… : hanasa ny lamba malotony ny zandarimariam-pirenena
Ambetin-dresaky ny olona any ambanivohitra ny hoe : “Aleo mifanena amin’ny malaso toy izay mifanena amin’ny zandary” noho ny tsy fahatokisan’ny olona ny zandary. Manoloana izany indrindra nandray fepetra hentitra ny (Seg) vaovao, ny Jly Randriamahavalisoa Girard fa hanao fanadiovana anatiny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena …
“Tsy hisy ny fandriampahalemana raha tsy misy zavatra mipetraka sy voalamina. Hanadio ny ato anatinay izahay ka tena hanao ny asany tokoa ny zandarimariam-pirenena fa tsy hisy intsony ny zandary hanao asan-dahalo na hiray tsikombakomba amin’ny dahalo. Izay minia manao asa mandoto ny zandary dia efa nisafidy tsy ho anisan’ny fianakaviamben’ny zandary intsony. Izany ny tarigetra ary izay no ifotorako”, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg) vaovao, ny Jly Randriamahavalisoa Girard nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny birao fiasany eny Betongolo, omaly. Nohamafisiny fa ny zandarimariam-pirenena dia miaramilan’ny lalàna. Mitaraina mafy ny tantsaha amin’izao fotoana izao noho ny antony roa : ao ny fandravana feno habibiana ataon’ny malaso. Ao koa ny ataon’ny zandary sasan-tsasany manao asa mifanohitra amin’ny maha zandary azy. Mba hahafahantsika mandamina ity tanintsika ity dia tsy maintsy ny ato anatiny aloha no alamina. Araka ny nambarany hatrany, natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny zandary ka izay mihoa-pefy mandika izany dia tsy ao anatin’ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena. Tsy natao ho fitadiavam-bola ny asan’ny zandarimaria na natao hanaporetana ny tantsaha, handravana ny fananany amin’ny fomba tsy mendrika.
Tena hanadio tanteraka…
Midika izany fa tena hanadio sy hanohy ny ezaka vitan’ny teo aloha ny Seg vaovao manoloana ny kolikoly sy ny fihoaram-pefy ataon’ireo saonjo iray lohasaha ka mety handratsy endrika ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena.
Nohitsiany mihitsy aza fa hoe ny malaso no tsy azo tenenina fa ny zandary manao ny asan’ny malaso kosa efa fantany ny hiandry azy. “Tsy maintsy averina sy porofointsika zandary fa olona nisafidy hiaro ny vahoaka isika fa tsy natao hampijaly azy. Tsy hisy intsony ny hoe aleo mifanena amin’ny malaso toy izay mifanena amin’ny zandary. Tsy misy afa-tsy izay ny fomba hiadiantsika amin’ny malaso”, hoy izy.
Teo aloha teo, tsikaritra fa voasaringotra hatrany ny sasany amin’ireo zandary na amin’ny asan-jiolahy izany na amin’ny trafikana fitaovam-piadiana toy ilay nitranga tany Fenoarivo Atsinanana, ny volana marsa lasa teo.